Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika dia nanambara ny toerana fanaovana vaksiny COVID-19 any Montego Bay Convention Center
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika dia nanambara ny toerana fanaovana vaksiny COVID-19 any Montego Bay Convention Center
Ny fizahan-tany ao Jamaika dia miantso ny feo hanohitra ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia maneho fahafaham-po amin'ny fananganana ivelan'ny Montego Bay Convention Center (MBCC) ho toerana fanaovana vaksinin'ny COVID-19.
Manome fanampiana ho an'ny minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fahasalaman'ny olona hitondra vaksiny bebe kokoa.
Nanomboka ny fandaharana fanaovam-baksiny COVID-19 i Jamaika tamin'ny volana lasa teo ary hahazo vaksiny bebe kokoa any amin'ireo sampana.
Ny haingana ny firenena dia afaka mahazo olona maro vaksiny, ny haingana kokoa dia afaka manomboka ny fizahan-tany ny fizahan-tany satria hitombo ny fahatokisana ny dia.
Nandritra ny fitsidihana ny Montego Bay Convention Center (MBBC) ny 10 aprily dia nanasongadina ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika fa: Ny MBCC dia rafi-panjakana an'ny minisiteran'ny fizahantany, noho izany, faly aho fa afaka nanohana ny ezaka nataon'ny minisiteran'ny fahasalamana sy ny fahasalamana mba hahazoana olona maro vaksiny sy hanampy amin'ny fampihenana ny fihanaky ny aretina. ”
Ny sasany tamin'ireo olona nisafidy ny hanao vaksiny tao amin'ny MBCC dia nahitana mpiasan'ny fizahan-tany maro tao amin'ny faritra sy ny manodidina.